Daraasad Bayaamisay In Kafeega Laga Helo Awood Iyo Firfircooni | Arrimaha Bulshada
Home Bulshada Daraasad Bayaamisay In Kafeega Laga Helo Awood Iyo Firfircooni
Daraasad Bayaamisay In Kafeega Laga Helo Awood Iyo Firfircooni
Sunday, May 14, 2017 Bulshada Edit
Bulsha:- kafeegaWaxa dhawaan la ogaaday in shayga la yiraahdo koffeiinet ee ku jirta kafeega uusan ahayn mid sidaa u awood badan. Taas oo ka dhigan in qofka sida joogtada ah u cab hal koob oo kafee ahi uusan caajisku ka saarayn.
Hadaba sida lagu sharxayo daraasad lagu sameeyay qaybta tijaabooyinka cilmi nafsiga ee jaamacada Bristol ayaa waxa ay soo bandgigtay in marka uu qofku cabo kafee uu u malaynayo in uu caajiskii ka baxay. Laakiin taasi waxaa ay daraaddu ku tilmaantay “illusion” oo ah istusid ama in la is dareensiiyo dareen aadan si dhab ah u dareemaynin.
Tijaabadan ayaa waxa lagu sameeyay 379 qof oo laga joojiyay in ay cabaan kafee waqti dhan 16 saacadood. Kadbib ayaa waxa la siiyay qaar ka mid ah kafee qaarna placebo (wax aan kafe ahayn oo qofka u malaynaayo Kafee). Kadib ayaa waxa la arkay in wax farqi ahi u dhexayn kuwii cabay kafee-ga caadiga ah iy kuwii la siiyay cabitaanka placebo.
Waxa kale oo baaritaanka lagu ogaaday in kuwa sida joogtada ah u caba kafee in uu jirkoodu la qabsaday kafeiin-ta. Hadaba marka qofka sida joogtada ah u caba kafeega in uu dareemo firfircooni ayaa waxa sabab u ah jirka oo hela kafeiin-ta uu tabayo. Sidaa darteedna aanu u ahayn mid firfircooni laga helayo, caajiska kaa bi’iya.